"KFCက menuအသစ်ဖြစ်တဲ့ K Pop Fried Chickenနဲ့ Coke Freeze" 4232 views
မနေ့က KFCမှာ menuအသစ်တစ်ခု ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရထားလို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်က KFCကို MyLann သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ထဲရောက်တော့ အော်ဒါကောင်တာမှာ အမ menuအသစ်ထွက်ထားတာက ဘာလဲလို့မေးတော့ အဲဒီ့ကအမက K Pop Fried Chickenနဲ့ Coke Freezeဆိုတဲ့ နှစ်မျိုး အသစ်ထွက်ထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာတဲ့ K Pop Fried Chickenဆိုတော့ နာမည်လေးက ဆန်းနေတာနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး K Pop Fried Chickenနှစ်တုံးရယ် Coke Freezeရယ် အားလူးကြော်ရယ် မှာလိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ စားမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ!!ကြက်ကြော်လေးကို အရင် အကဲခတ်ကြည့်တယ်။ ကြက်ကြော်လေးက ရဲရဲလေးနဲ့ ကြွပ်ရွမဲ့ပုံလေး Coke Freezeကို ကြည့်လိုက်တော့ wowပေါ့ ရေခဲလုံးဝမပါဘူး ရေခဲမှုန်လေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ K Pop Fried Chickenလေးကို အရင်ဆုံးစမြည်းကြည့်တယ်။ အပေါ်က အရေခွံကြွပ်ကြွပ်လေးကို အရင်ဖဲ့ပြီး စားကြည့်တယ်။ ကြက်အရေခွံလေးက ကြွပ်ရွနေတာပဲ ဝါးရင်းဝါးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ချဉ်လာစပ်လာတာဆိုတာ စားပြီးသွားတော့ လျှာပေါ်မှာ ချဉ်စပ်အရသာလေး ကျန်ခဲ့တယ်။ စပ်သွားလို့ ချက်ချင်း Coke Freezeလေး သောက်လိုက်တာ ရင်ထဲကို အေးစင်းသွားတာပဲ။ ရေခဲခြစ်ကလေးသောက်ရသလိုပဲ အရင်တုန်းက Coke ကိုရိုးရိုးရေခဲနဲ့ သောက်ရတဲ့ အရသာနဲ့ လုံးဝမတူဘူး။ နောက်တော့ အထဲက ကြက်သားကိုပဲ စားကြည့်တယ်။ ကြက်သားကတော့ အရင်ကထွက်ထားတဲ့ ကြက်ကြော်အရသာပဲ ထူးခြားမှုမရှိဘူး။ အပေါ်က ကြက်အရေခွံနဲ့ အထဲကကြက်သားနဲ့ တွဲစားတော့မှ အရသာက ကြွပ်ရွနေပြီးတော့ လျှာပေါ်မှာ ချဉ်စပ်အရသာလေး စွဲကျန်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီမှာပေးထားတဲ့ ဆော့စ်နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့လည်း တွဲစားကြည့်တယ်။ အရသာက တစ်မျိုးတစ်မျိုးစီ ထွက်ပြီးစားကောင်းတယ်။
စားလည်းပြီး သောက်လည်းပြီး ဗိုက်လည်းတင်းတော့ ဒီကစပ်စုစိန်မက K Pop Fried Chicken နဲ့ Coke Freezeလေး အကြောင်းမေးကြည့်တယ်။ K pop Fried Chickenကို ဆန်လှော်မှုန့် ကြက်သွန်နီ Capsiumငရုပ် နံနံပင်နဲ့ ငရုပ်ဖတ်လေးတွေကို ရောပြီး ချဉ်ငံစပ်အရသာနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေး ဖြစ်နေအောင် ကြော်ထားတာတဲ့။ ကိုရီးယားပုံစံ ကြက်ကြော်တဲ့။ နံနံပင်ပါတယ် ဆိုပေမဲ့ နံနံပင်အရသာကို အရမ်းကြီး မရခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် နံနံပင် မကြိုက်တဲ့ သူတွေလည်း စားလို့ အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ Coke Freezeကတော့ ရေခဲအစားထိုး ရေခဲမှုန့်လေးတွေနဲ့ ရေခဲခြစ်ပုံစံမျိုးလေး လုပ်ထားတာတဲ့။ Colaနဲ့ Orange အရသာနှစ်မျိုး ထွက်ရှိနေပါပြီတဲ့။ မက်မွန်သီးနဲ့ ပြုလုပ်မဲ့ အချိုပွဲအသစ်တစ်ခုလည်း မကြာခင်မှာ ထွက်ဖို့ ရှိတယ်တဲ့။
ရန်ကုန်မြို့က KFCဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာ K Pop Fried Chicken & Coke Freezeတွေ ရရှိနေပြီတဲ့နော်။ ပဲခူးတိုင်းက KFCချစ်သူတွေလည်း ပဲခူးမြို့နယ်က KFCကြက်ကြော်ဆိုင်တွေမှာ သွားရောက်အားပေးလို့ ရနေပါပြီတဲ့။ မန္တလေးတိုင်းနဲ့ တောင်ကြီးမြို့က KFCချစ်သူလေးတွေကတော့ ခဏလေးစောင့်ပါဦး။ မကြာမှီ ဝယ်ယူအားပေးလို့ရအောင် KFCက အမြန်ဆုံး စီစဉ်ပေးပါမယ်တဲ့။
အော် ဒါနဲ့ နောက်ထပ် သိခဲ့ရတဲ့ အရေးကြီးတာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ KFCမှာ အကပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခု ကျင်းပထားတယ်တဲ့။ ပြိုင်ပွဲလေးရဲ့ နာမည်က 'KFC KPOP Online Dance Challenge'တဲ့။ အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာ ဝင်ပြိုင်လို့ ရပြီး နှစ်ယောက်တွဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာတဲ့နော်။ လုပ်ရမှာကတော့ one minute KFC K POP routineကို KFC K POP dancerနှစ်ဦးလိုမျိုး အနီးစပ်ဆုံးတူအောင် အကောင်းဆုံး ကပြတင်ဆက်ရမယ်။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက အကဗီဒီယိုလေးကို တစ်မိနစ်စာပဲ mobile phoneနဲ့ ရိုက်ကူးရပါမယ်တဲ့။ ဗီဒီယိုကင်မရာတို့ ကင်မရာတို့နဲ့ ရိုက်ကူးခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့နော် အဲဒါလေး သတိထားနော်။ ပြီးရင် Facebookပေါ်က ကိုယ့်wallပေါ်မှာပဲ တစ်မိနစ်စာ နှစ်ယောက်တွဲကထားတဲ့ အကဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြီး #kfckpopdance လို့ရေးပေးရပါမယ်တဲ့။ အဲဒီ့stepလေးတွေ ပြီးသွားရင်တော့ အကပြိုင်ပွဲလေးထဲကို ပါဝင်သွားပြီပေါ့ !
ပထမဆုရတဲ့ စုံတွဲနှစ်တွဲကို ဘန်ကောက်မြို့ရှိ K POP Theme Mall, Show DCကို အသွားအပြန်စားရိပ်ငြိမ်း ဒုတိယရတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲကို Fujifilmကင်မရာ တတိယရတဲ့ စုံတွဲကို JBL Headphone ချီးမြှင့်သွားမယ်တဲ့နော်။ ပထမဆု ဒုတိယဆု တတိယဆု မရတဲ့သူတွေလည်း ဝမ်းမနည်းနဲ့နော် နှစ်သိမ့်ဆုအနေနဲ့ 3,000ကျပ်တန် KFC cash voucher အစောင်ရေ၃၀ကို ချီးမြှင့်ပေးသွားဦးမှာတဲ့။ ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ကပြရမဲ့ ကကွက်တွေကို တင်ဆက်ထားမယ့် ဗီဒီယိုကို KFC Myanmar pageမှာ တင်ထားပေးပါမယ်တဲ့။
WowW အရမ်းမိုက်လွန်းလို့ Mylannကတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ MyLannရဲ့ မိတ်ဆွေရောင်းရင်းတွေလည်း KFCက new menuဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားပုံစံကြက်ကြော် K Pop Fried Chickenလေးနဲ့ Coke Freezeလေးကို သွားမြည်းကြည့်ရင်း ဆုကြေးတွေ ရရှိဖို့ KFC K POP Online Dance Challengeလေးကို ဝင်ပြိုင်လို့ရအောင် MyLannက လက်တို့ပေးလိုက်ပြီနော်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ့် MyLannရဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် KFC K Pop dance tutorialလေးကိုလည်း အောက်မှာ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်